उद्यमी तथा साहित्यकार वसन्त चौधरीको दुईवटा कविता संग्रह सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘तिमीविनाको म’ र हिन्दी भाषामा लेखिएको काव्यकृति ‘अनेक पल और मै’ मंगलवार काठमाडौंमा श्री लूनकरणदास-गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै लोकार्पण गरेको हो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र वरिष्ठ कवि तथा कार्यक्रमका सभापति तुलसी दिवसले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
काव्य कृति ‘तिमीविनाको म’की प्रकाशक मेघा चौधरीले प्रकाशकीय मन्तव्य राख्दै सामान्य अर्थमा पिताको पुस्तक छोरीले प्रकाशन गरेको भन्ने अर्थ मात्रमा यो पूर्ण नहुने बताइन् । उनले व्यापार व्यवसायमा भन्दा पिता साहित्य सिर्जनामा बढी रमाएको पाएकाले पिताको खुशीको माध्यम बन्ने प्रण गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बुबाको खुशीलाई मैले थप उजागर बन्न आफू प्रकाशक बनेकी हुँ, यो एक हिसाबको पुस्तान्तरण पनि हो ।’
उनले यी कविताहरू भावी सन्ततिहरूका लागि भाषाप्रतिको प्रेमका लागि समेत उल्लेखनीय हुने बताइन् । कार्यक्रममा उनले आफू बुबाको सपना भएको र बुबाको काव्यिक यात्रालाई आफूले समेत निरन्तरता दिने बताइन् ।
समीक्षात्मक मन्तव्य राख्दै प्राध्यापक भुवना ढुंगानाले आफूले चौधरीको सबै कविता पढेको सुनाइन् । उनले ‘तिमीविनाको म’ कवितासंग्रह पढेपछि ‘ह्युमन नेचर’ बारे जान्न मन लागेको सुनाइन् । ‘व्यस्ततालाई चिरेर कसरी यस्तो राम्रो कविता लेख्न सके रु भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै धनबाहेक अरू के हो खुशी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा साहित्य सिर्जना नै हो भन्ने पाएँ ।’
समालोचक ढुंगानाले सो काव्यकृतिमा प्रकृति, प्रेम, जीवनको मूल लक्ष्य, जीवनको खुशी समेटिएको बताइन् । कवितामा चौधरीले आफ्नो जन्मको बारेमा समेत लेखेको र आमाबाबुप्रति प्रेम दर्शाएको उनले सुनाइन् ।
साहित्य लेखन निकै गाह्रो हुने भन्दै प्राध्यापक ढुंगानाले कविता निकै सरल भाषामा रहेको र भाव निकै गहन भएको सुनाइन् ।
उनले साहित्यमा राजनीति नगरिने बताइरहे पनि केही राजनीतिक छनक भने देखिएको बताइन् ।
‘केही कवितामा चौधरीले राजनीतिक चिन्तन गरेको देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा मुम्बई विश्वविद्यालय हिन्दी भाषाका अध्यक्ष प्रा.डा. करुणा शंकरले काव्यकृति ‘अनेक पल और मै’मा समीक्षात्मक मन्तव्य दिँदै चौधरीको कविता जीवनको अनुभवबाट सिर्जित हुनु नै उनको मुख्य विशेषता भएको सुनाए ।
उनको कविता पढ्दै गर्दा जीवनको पाना पल्टाइरहेको आफूलाई महसुस भएको उनले बताए ।
आफ्नो जीवन वा समय वा समयको अनेक पललाई चौधरीले पुस्तकमा काव्यात्मक शैलीमा राखेको प्रा.डा. शंकरको भनाइ छ ।
पुस्तकमा राखिएको कवितामा चौधरीले मुलुक, समाज, प्रेममाथि गहिरो चिन्तन गरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा कविता संग्रहका लेखक चौधरीले लामो समयको प्रतीक्षापछि आज भेला हुने अवसर जुटेको बताए । उनले कोरोना महामारी र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पुस्तक सार्वजनिक हुन केही ढिलाइ भएको बताए ।
उनले मानव मन हरेक क्षण नयाँ-नयाँ सोचिरहने भन्दै सोचेर कहिल्यै नथाकिने बताए । ‘कसैको वियोगमा हामी भावविह्वल हुन्छौं भने केही नसोचेको पाएमा खुशी हुने हुन्छ, मेरो ‘तिमीविनाको म’ काव्यकृति तिनै भावनाहरूको सम्मिश्रण हो,’ उनले भने ।
‘अनेक पल और मै’मा आफूले हरपल नयाँ अवसरबाट गुज्रिरहने चरित्रलाई उतारिएको उनले सुनाए ।
मंगलवार लोकार्पण गरिएको चौधरीको ‘अनेक पल और मै’ काव्य संग्रहलाई कलिङ लिट्रेचर फेस्टिवल २०२१ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
भारतको उडिसामा भएको कार्यक्रममा चौधरीको सो कविता संग्रहलाई सम्मान गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गंगाप्रसाद उप्रेतीले चौधरीले कविता लेखनमा सिद्धि प्राप्ति गरिसकेको बताए । चौधरीको साहित्यमा जीवनलाई महान परिभाषा दिइएको उनले सुनाए ।
कार्यक्रममा उद्योगपति भएर पनि कला साहित्यलाई निरन्तरता हुनु उनको विशेष खुबी भएको भन्दै उप्रेतीले चौधरीको प्रशंसा गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सभापति तुलसी दिवसले मान्छे हुनुको कारण नै उसमा निहित भएको सिर्जना भएको बताए । चौधरीको सिर्जनशीलता सबैतिर फैलिएको भन्दै कताकता आफूलाई ईर्ष्या पनि लागेको सुनाए ।
कार्यक्रममा कवि चौधरीको बारेमा वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
चौधरीको ‘तिमीविनाको म’ मेघा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको हो भने ‘अनेक पल और मै’को प्रकाशन वाणी प्रकाशनले गरेको हो ।
यसअघि चौधरीका ११ कृति प्रकाशित छन् ।